September 30, 2019 adminMarketingLeave a Comment on GABAYADA HADRAAWI PDF
Author: Malataxe Goltigore
Qof hadduu kal-gudan yahay, Birmageydo sudan yahay, Gorka iyo saliilkiyo, Dacartiyo gubnoodkiyo, Gudur laguma sooree, Ama waa ganuun sii, Ama galax ku sooryee, Ama xagal u geedee. Hub maxaad ka sidataa?
Isticmaarku xeel iyo Xanaf iyo wax-yeelliyo Xanan iyo dhibaatiyo Xadhko miidhan weeyoo Sida geed xajiinluu Xagxagtaa kor kaagee Xadantada gumeystaha Xaram lagaga maydhaay Xudduntii dhulkaygaay Xaruntii dadkaygaay Xamareey ma nabad baa? Sida xuur wedkeedii Xan ahaa ku maqashaan Amba xiisahaagii Xamarey la dhuubtoo Xalay waxan baraarugey Iyadoo xiddayseey Inta xaysku kuu da’ay Dhulku wada xareed iyo Xamash iyo ugbaad iyo Xilli yahay barwaaqoo Dayaxaagu xaynkiyo Xuubkii dillaacshoo Inta uu xanjaadkiyo Xagal qudha la soo baxay Dusha sare xinnaystoo Dhallinyaro xariiriyo Halbo Xuural-caynii Isasoo xusheenoo Xeebtaada yaabka leh Inta ay xaraaraha Laba laba u xaadheen Xusullada dhigteenoo Xeerkii kal-gacalkiyo Lagu jiro xisaaboo Xantu hoos u socotoon Aniguna Xayaad iyo Xiddigtii jacaylkee Shanta xaraf mid lagu daray Xog-waraysanaayoon Kolba xaada cududdiyo Xaradhkiyo garaaraha Il-badhkeed ku xadayee Xudduntii dhulkaygaay Xaruntii dadkaygaay Maxaad aniga oo xidhan Lahashada xanuunka leh Ii xusuusinaysaa?
Heedhee Sahraay heedhe Saxariirka aafaadka Saxallada kal-meerkooda Sambabkuba col weeyaane Marka saymo loo gaayada Ama soofku jaan qaado Ushu way sabooshaaye Ha ku dagan sidsidadkeeda Qalinkaa wax suureeya Kugu sima halkaad doonto Saaxiib kal furan weeye Sunto fara ku hayntiisa Weligaa ha sii deynin.
Maxaa geydha yoontiyo, Gabayooxa ina baday?
Ninka ii darraadow Anba waw darsanayaa Dibin-daabyadaadee Tirtirsiga ha iga deyn Carrab dananka laasima Wacdi dowdab lagu yidhi Ninka ii dudubiyow Kuma deexdo hadalkee Wax kaloon daneeyoon Ku damqado ma haysaa?
Islaam dilan baynu nahay Go’a lay huwinayaa Ma dhaliil gurracan baa? Maxaan geystay oo dhimay? Maxaan dhilay doog lingaxan Maxaa duunyo weli nool? Ma ufaa ma dabayl!?
Balse waxa la yaab gabayadda Nin barwaaqo haystoo Ka engegan badhaadhee Bishmahaagu Caarrow Maxay kuu basaaseen Ma buskaad is-marisaa? Tub hayowna aashaa Ha is taawin keligaa Waannu kaa jadraawi haynaa Bulshadaa tixraaciyo Taladiyo gudoonka leh Wuxu yidhi ” tawaawacay Turubkana sukaan degey Wax kaloon tammediyoon Tobanlaha ku waabshaa Taabkayga kuma hadhin Tuur tuurka geba gebo Toddobaale igu dhiga Lixle dhiirran igu tuma” Boqorkii tilmaannaa Taagtiisa kibiryoo Qayrkii ku tanaxwee Tagganaan ku raacdee Inay tiisa noqotee Tartankaa ku dheeraa Wuxuu tiigsanaayiyo Tuun-tuunsigiisii Taabba qaadi waayoo Tafa xaydadkiisii Labadaba tukaa cunay.
Dhulka gogol laseexdiyo sabo lagu negaadiyo laga dhigay sin-dadabkee buuraha la saaree. Hadrazwi goolli-baadhkii, Iyo laba-garlayntii, Faras buu u gedo-baray. Ubaxeey bahalaa Ku ilaashanayoo Ubaxeey hororaa Ku ugaadhsanayoo Araraa kugu dhow Orgobaa fadhiyoo Aarna waa gudayaa Iimo kaa deyayaa Geenyo aamus taqaan Tuugba waa eryadaa Mar baa ayrada geel Oohow loogu digaa Anfariirka dareen Adhibaaba didee Ahmin baa la gataa Hilbahaaga Ardooy Lama iibsan karee Aanadaada ha deyn Rag ul baa celisoo Ka adkayso qudhay Ammaantaadu tahee Waa arooryo horoo Hadraawi kuu baxayaa Amba qaadka salad Weeye loo addimoo Hadal waa la abyaa Waa hadraxwi soo ururshaa Arrintaada marwooy Wixii iiga ekaa Horaan kuu idhee Arbacuunkani waa Abhintayda danboo Waa ilayska hadeer Addinkaagu halkuu Ku abaaranyahoo Waa ammaano dadeed Amarkaan ku faro Waa asaaska halkaan Ka awaala digoo Axdigaas culus baan Adhaxdaada furee Sheekadaada ogow Idlaadkeeda hadhow Adduunkaa sugayee Af-dhabaandhab haddaad Oofin weydo xilkaas Way ahaan jirtey saas.
Asaasaq ku gaadha maaha, Ma is dhaafsateen hadal?
Wax diiddo markay jirtaa Axsaantu ka maydhan tahay, Rabbow ducadayda sii Qorannimada waa tii Qoor-gooyo laqan iyo Qaryad weer cad xidhatiyo Lagu helay qisaastee Hadmaa qaabkan loo roggey? Hilbahayga qoonmiyo Qayaxnaanta jaahiyo Sida qaansadii godan Joogaan soo qandood sadey Qurubsiga tallaabada Qalqalloocan igu dhacay Ma lahayn qallaafee Qoontayda hoosiyo Waxa qaabkan iga dhigay Qisadaas ma haysaa?
Asluubtana qoomi maayo, Gabadh baa iyana tidhi; Googgaa raggaygow, Intayada garayskiyo, Garbo-saarta xidhataa, Weli waan gudaynaa, Gudin baannu weynee, Girif giriftu waa tii, Hadaad geel cas weydeen, Aynu wada gumownoo, Gees dheerta dumarkiyo, Rida Garo dhammaanteed, Aynu wada gujaynee, Xera adhiga soo gala!
Hadraawi wuxuu maansada ku kala furaa aqoontiisa cilmiyeed iyo kartidiisa hal abuurnimo. Ubaxley shan ubaxley Magacaagu waa udub Gacmahaagu eegmada Waa laba ulooddoo N. Yaa mageyno irmaan Dhasha looga hadraawi Haddaan doogga cawskiyo deegaantu saarayn dhulku duug ma yeesheen dihaal mareebeen qofna kuma daneysteen Rabiyow dushiisoo, dunidaada eebow adigoon cid dirranbaad todobaad ku dadabtoo iyaddoo dambarisoo sida doonan gabadheed inta timaha loo dabey dunta hadrqawi afmeershaa laga furey daboolkoo dalagkaad ku beertaa ninba weel darsanayaa.
Duni toocsi mooyee Ninna taab ku qaban waa Qofba wuxuu ka taransaday Teel teel ku noqotoo Inkastuu ku talax tago Wuxuu tabanayaa badan Tagtadiisa xiise Tiisa joogta haaraan Kaga daran timaaddadu Tixdu waa abbaartaas.
Hablo Xuural-caynii Sow kuuma ahdraawi Hadda salamadhlow gaabi Ha ku jabin saqlaa waalan Hadraaawi ololka hoy jooji Ha saloolan xayndaabka Ha ku bixin saloognaanta Ha sarriiran waayeelka Sakatiga ka daa beesha Saha iyo af kala qaadka Ha ka nixin hiddaa suubban.
Sange orod la dabagalo salyar buu u necebyahay codka salalka bayrtiyo Dadka qaar sacsacanoo sirqa ba,an ku noqotoo marba suuf ku dedayoo sawirkeeda necebyahay.
Hadday adhiyaysi tahay, Abbaar iyo nuxur lahayn, Saaxiibkayow heedhe Safar baan ka imi dheere Marka hore salaan diirrran Marka xiga samow heedhe Ha ka nixin si-dalagtayda Sacab fara-madhnaantayda Suugaanta yaabkeeda Salka iyo fadhaa keena Marka xiga sugnaanteeda Socodkiyo falkaa sheega Xeerkeedu waa gabayyada. Ragoow irdho qaadan maysid, Geel aan irmaan iyo Gabno iyo candhooliyo Madi guuto deeqdiyo Gaaniyo horweyn iyo Awr goola wadannoo Gaban daadahaynoo Gallad ciddi ku qabinoo Lala gelin hadhuubkoo Geedaha aqoonnoo Garow loo bisleeyoo Geeslow Biciidkiyo Garanuugta seenyoon Loo soo gabraaroo Misna guul-darraystow Ganac loo wardheeroo Cidi gaadhi weydoo Ninna goosan waayoo Dhaqankiisu gaar yahay Waa xaal gurracanoo Gurranoo la yaablee Waxaan uga gol leeyahay Ruuxii gartow sheeg.
Shirkii ruux garaaboo Gacan taaga laga waa Iyadana ka sii gudub Kuye gacallayaalow Boqol shilin ha lay guro Goroddaa la wada lulay Ku go’ baana lagu yidhi. Ka muuqda adduunyadeenna, Heesaha uu sameeyay waxaa ka mid ah heesta hooyo ee uu qaado Maxamed Saleebaan. Beer oodanoon Irrid furan lahayn Haddii ubax jacayl Ula sare ku yaal Naf oggoli talooy Illinkee martaa?
Maxaan dihin weel la galay Kuye “waaban daalee Sawtii Duleedow Daandaansi keentee Jin dagaagay maagtee Aqalkii ka dumisee Lagu helay danbiga culus Sawtii la doorshee Dalandoolli laga dhigay Intaan xoolo dabar go’in Duugowyey xiisii Dirga waayey hadalkii Indhuhuna is daydaye Wuxuu yidhi “dad yaa hadhay?
Nimaan diiftu saarrayn Dusha sare ka qolof dhicin Dubatadu ku shaacnayn Nimaan daawa shiillayn Ama degel ku sheellayn Ama dibad ku sheegnayn Daymadaydu suurayn Waxa loogu digayaa Dohdu Waamo maahee Dirir baa ka socotee Firdhisada iskaga durug Marka dirir gabaabsiyo Isma dayada dhiifta leh Iyo duraha jiilaal Dayawgiyo kulka is wada Doorsoonka garashada Daaddduunka nugukiyo Doc ku dhiidhigeediyo Dar-wisiisigeediyo Dambabeera ruqankiyo Daabaan u jedankiyo Duul duuka Jaahweyn Anigaa ka doogoo Weligay danbeeyee Dhulka deexda dharabka leh Nin dallaallimaystow Dad anaa ku hadhayee Dhanka kale u diga rogo Anoo daaya mooyee Godobteyda daah iyo Dadab yaa ku xidhi kara?
Gabayyada kaaga aayo beelay, Wixii arrin kaa daboolan, Irmaanta xaqeeda siiya, Heedhee Sahraay heedhe Dhulka iyo wixii saran Sare gabajada wixii laalan Inta sudan intii seemman Waxa jira sir iyo caadba Rabbi qudha sax weedhiisa Sida uu ku yidhi buuxi Waxa hadhay salka iyo baarka Inta sool qarsoon joogta Inta seel xidhxidhan jiifta Inta saydha waabayda Maroodiga siddaa dheer leh Wiyil iyo sahboodkeeda Inta laga subxaanaysto Kolay tahay libaax sayn leh Marka aad Sahraay meel fog Uga suul-dhabaaleyso Deg-deg inay sujuuddaada Suxullada dhigtaan weeye!
Ma naftii ku eeddeed Obocdeeda karisee Ishu kaaga fagantaan Usha kaaga reebaan Igdhayee sabaayee Uubaale geeyeen Meelaanay kaa arag Ku ilaalinaayaa Soo jiidhay ooddii Ma adaahidii baa? Iimaanka hadduu xaraasho, Guuguule wuxuu yidhi; Cabdallaa gurracantiyo, Ka gar-naqa la-yaabkoo, Halka loo gol leeyahay, Xogta sii god raacee, Galabtiyo ogaalkiis, Nin ka gura u doon doon, Keyse guusha loo daa, Isna wuxu war gaadhsiin, Xerta gacan-togaalaha!
Halyeynnimadaada sheelan Habawgiyo dhiirintiisa Ayaan halis kuu tusayne Intaan kugu hawlo-daaley Intaan kugu hoodo-sheegtay Intaan hebla’ kuugu faanay Hilaado fog bay lahayde Inaan hafarkaaga qaato Sidaad ku heshaa da’ weyne Adiyo habigaaga badraawi Danaysigu weel u yahay